Iibsashada Khadka Xashiishadda Si Sharci-Leh ah - Tilmaanta Fudud ee Seeds Marijuana
Iibsashada Seeraha Xashiishadda Online
Ma sharci baa in lagu iibsado abuurka haramaha khadka tooska ah?
Ma sharci baa in la iibsado abuurka haramaha
Iibsashada abuurka cannabis khadka tooska ah waxay noqon kartaa mid sharci ah iyada oo ku xidhan halka aad ku nooshahay, ama waxaa laga yaabaa in la go'doomo. Si loo soo koobo sharcinimada iibinta xashiishadda cannabis ee tooska ah ee internetka, waxay kuxirantahay haddii gobolku oggolaado marijuana sharci ah.
Fadlan la tasho a Qareenka cannabis ee gobolkaaga ku saabsan haddii ay sharci kuu tahay inaad iibsato abuurka xashiishadda. Gobollada ayaa cusboonaysiiya sharciyadooda xashiishadda ama xashiishadda - tusaale ahaan, Illinois sharciyeysan ayaa ku koraysa Janaayo 2020 bukaannadeeda caafimaad. Illinois ayaa sidoo kale u oggol inay iibinta miraha xashiishadda ay ka keento miinooyin. Halkan waxaa ku xusan sharciga xashiishadda cannabis ee Illinois ee u oggolaanaya abuurka xashiishadda, taas oo fikra ahaan laga iibin karo websaydhkooda.
Sideed ugu iibsan kartaa abuurka xashiishadda si sharci ah?
Hubi sharciyadaada maxalliga ah, waddamo badan oo sharci ah ayaa u oggolaanaya miraha xashiishadda in si sharci ah loogu iibiyo xashiishooyinka shatiga leh ama xanaanada cannabis. Tusaale ahaan, hoos waxaa ku yaal tusaale muusikada 'cannabis' ee Illinois ee ku saabsan sida qofku u iibsan karo xashiishadda cannabis si sharci ah.
LA XIDHIIDH BADAN: Cannabis Guryaha Ku Koro Magaalada Illinois
LA XIDHIIDH BADAN: Xashiishka qoyan ama qallalan cannabis?
Marabtaa inaad furato Kobc sharciyeed
Waxa la raadinayo Markaad iibsanayso Xashiishadda Cannabis Online
Iibsashada abuurka cannabis khadka tooska ah waa inay ahaataa wax fudud. Waxaad aadaa degel, ka dibna ka doortaa noocyo badan oo badeecooyin ah, oo aad naftaada u soo qaado sheyga ugu fiican. Waxay u muuqataa wax fiican, laakiin taasi ma ahan wax fudud.
Waxaad ka heli doontaa meela badan oo dadka ku khalkhaliya khadka tooska ah ee internetka haddii aad sii waddo marka aad ka raadiso abuurka cannabis khadka tooska ah. Websaydhadan ayaa kor u qaada miraha xashiishadda iyo saameyntooda xoogga leh, laakiin asalka bogagga ayaa ah kuwo aad u xishood badan.
Kadib, sidee loo heli karaa miraha cannabis ugu wanaagsan khadka tooska ah?
Waxaad ka raadsan kartaa ilaha ay quseyso mashiinka raadinta internetka. Waxaa jiri doona dhowr iyo toban websaydh oo dhamaantood aad ugu faraxsan in ay kugu iibiyaan abuurka cannabis khadka tooska ah qaar badan ayaa xitaa ku andacoonaya inay sharci tahay. Maqaalka soo socda, waxaad ku baran doontaa sida loo helo meel ku habboon oo lagu iibsado abuurka xashiishadda iyo sida ugu habboon ee loo isticmaalo marka aad guriga ku haysato.
Waa kuwan jawaabaha.
Maxay Sabab u Yihiin Beero Cannabis Aad U caan Yihiin?
Abuurka cannabis ayaa caan ku ah khadka tooska ah sababtoo ah kama heli kartid dukaamada caadiga ah. Qaar badan oo ka mid ah miinooyinka iyo xashiishadda cannabis ayaa iibiya tiro yar oo ah waxyaabaha xashiishadda cannabis, miraha badiyaa kuma jiraan liistada.
Maxaa la sameeyaa si looga helo abuurka cannabis ugu wanaagsan khadka tooska ah?
Si aad uga hesho abuurka cannabis ugu wanaagsan khadka tooska ah, waa inaad eegtaa websaydhyada soo socda:
Waxaa jira natiijooyinka ugu sarreeya 3 ee mashiinka raadinta Google ee ku saabsan su'aashan la isweydiiyo kumanaan jeer bil kasta, xitaa adiga - isku daya inaad ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iibinta xashiishadda cannabis khadka tooska ah ee sharciga ah.
Mararka qaarkood, waxaad ka heli doontaa noocyada dhif iyo naadir ah, laakiin waa inaad had iyo jeer raadisaa xeerarka xashiishadda cannabis ee gobolkaaga gaarka ah. Markaad hesho farcanka abuur aan si rasmi ah loo aqoonsan, waxay calaamad u tahay inaad ku sii socoto oo aad hesho noocyo kale oo abuur abuur ah oo ka tirsan gobolkaaga.
Way fududahay inaad iibsato abuurka cannabis khadka tooska ah markaad aqoon hore u leedahay shuruucda dhabta ah. Gobollo badan, waxaa suurtagal ah in la helo liistada rasmiga ah ee noocyada xashiishadda ee aad iibsan karto ama iibin karto. Adeegso hagida saxda ah markaad ka raadiso abuurka cannabis khadka tooska ah.
Miraha Cannabis miyuu ku kordhayaa sicirka?
Way iska cadahay sababta shinnida cannabis qaarkeed qiimo sare ugu leedahay suuqa. Kuwani waa noocyo dhif ah, xeerarkooduna waa kuwo aad u khiyaano badan, taasina waa sababta ay miraha badani u qaali yihiin.
Waxaad u badan tahay inaad ka heli doonto kuwa leh heerka sare ee THC marka aad hal talaabo u sii dhaqaaqdo oo aad sameyso liistada miraha cannabis aad ugu jeceshahay. Haddii waxa ku jira uu ka badan yahay 0,3%, markaa waa inaad u baxdaa kuwa kale.
Xaaladda aad ka heshay abuurka inta badan laga heli karo gobollada kala duwan, qiimuhu sidoo kale waxay noqon doonaan dhexdhexaad. Xaaladda noocyada qaarkood, waxaad ogaan doontaa in qiimaha uu kor u kici karo haddii dalabka uu sarreeyo xilligan raadinta khadka tooska ah ee abuurka cannabis.
Si aad u hesho qiimaha ugufiican iyo tayada ugufiican waqti go'an, waa inaad diirada saartaa miraha xashiishadda ee u fiican marijuana soo koraya isla markaana leh qiimo macquul ah isla waqtigaas. Abuurka noocan ah waxaa laga heli karaa khadka tooska ah, waxaadna ka heli doontaa noocyada ugu fiican baahiyahaaga.
Sidee loo Doortaa Abuurka Cannabis Ugu Fiican?
In ka badan 3000 nooc oo miraha xashiishadda ayaa hadda suuqa jira. Noocyada noocan ah waxaa badanaa laga helaa meelaha aad ugu qaybin karto abuurka si sharci ah. Gobollada qaarkood, waa sharci in la iibsado, la iibiyo, lana qaybiyo abuurka cannabis iyadoo la siinayo rukhsad sax ah oo dukumiintiyo ah oo lagula tacaalayo abuurka cannabis.
Haddii aad rabto inaad sii waddo u hoggaansanaanta xeerarka xashiishadda cannabis, waxaad heli kartaa kaararka marijuana ee caafimaad ama madaddaalo si aad u isticmaasho dhammaadka alaabada. Inta ugu fiican ee awoodaada ah - had iyo jeer u hoggaansan sharciyada gobolkaaga ku yaal.
Abuurka cannabis khadka tooska ah waxay ku jiraan xirmo badan. Mid ka mid ah xirmooyinka aadka loo awoodi karo waa xirmo 10 abuur ah oo ay ka buuxaan taxaddar iyo daryeel. Isla mar ahaantaana, waad iibsan kartaa sanduuqyo badan waxaadna heli kartaa noocyada aad inta badan aad rabto. Haddii mid ka mid ah noocyada abuurku uusan ku habboonayn, waxaad dalban kartaa lacag celin oo aad ku dhegaan talooyinka dheeraadka ah ee iibsiga iyo iibinta abuurka xashiishadda.
Xashiishadda Cannabis miyeey ku hoos nool yihiin Sharciga Federaalka?
Kani waa ereyga sharciga ah ee “marihuana” heer federaal sida uu dhigayo Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay - Markii ugu dambeysay ee Imtixaanka: Juun 21, 2020
Waqtiyada xulashooyinka badan, waxaad u tagi kartaa kan ugu fiican oo raadinta kaliya badeecada si weyn loogu qadariyo suuqa. Markii aad ka iibsanayso abuurka cannabis khadka tooska ah, u fiirso miraha ku habboon kobcinta marijuana, oo qiimo fiican ugu fadhiya miisaaniyaddaada markay tahay qaddarka xashiishadda cannabis khadka tooska ah.
Waxaad dooneysaa inaad iibsato abuurka cannabis khadka tooska ah, laakiin si sharci ah u samee - si fiican, ma jirto hab adiga - ama mid kastaa - uu uga helo talo sharciyeed kanaalka youtube-ka - laakiin dadku way isoo wacayaan iyagoo weydiinaya sida tan loogu sameeyo sharci ahaan Illinois, qof walbana gobolka soo socda wuxuu u baahan doonaa macluumaadkan sidoo kale, sidaa daraadeed waxay umuuqatay inay tahay dhacdo kaamil ah…
Sida Dadku Ku Helaan Xashiishadda Cannabis Gobolkaaga
Aynu kahadalno sidii aad beertaada u abuuri laheyd - sidaa darteed waa jecelyahay oo qof walbaa uqeeyaa. Xusuusnow inaad fiiriso sharciga gobolkaaga ee ku saabsan koritaanka guriga. Halkan IL, bukaanka caafimaad kaliya ayaa ku kori kara. Iyagu way iibsan karaan abuurka, laakiin xaggee baad ka helaysaa - oo aad maqantaa ilaa dhammaadka oo aad baran doontaa sida dhirta cannabis ay ugu talogashay inay u gasho gobollo sharciyeysan inkasta oo ay dambiile tahay maalin ka hor, ama dambiile ilaa aad ka hesho ruqsadda oo aadan haysan gobolka ku siiyo dhirta.
Waxaan ka hadli doonnaa 5 waxyaabood oo ay tahay inaan ka fikirno markii aan helno iniinno xashiishadda cannabis ee gurigaaga caafimaad - ama qaangaarka u isticmaal koror guriga haddii gobolkaagu oggolaado - oo dhammaanteen waan ku ducaynaynaa IL iyo WA dhawaan si sharci ah. Laakiin iska ilaali kororka guriga ee isticmaalka dadka waaweyn - badanaa DEA waxay ku soo dhacdaa - sida gudaha CO ka dib markii kororka guryaha dadka waaweyni uu noqday sharci isla markaana CO ay sumcad sumadeed ka heshay gobolada ku xeeran.
Kaasoo noo keenaya waxa ugu horreeya ee aan tixgelinno markii aan iibsanno abuurka -
Dhibaatooyinka sharci xoojinta Arimaha iibsiga Seeraha Xashiishadda Online
Xadkaaga ha dhaafin. Waxaad ubaahantahay galaangal u hel dawadaada mana aha wax dhibaato ah - sida Glenn Keeling, waxaa ku dhacay isaga kaliya, sii daynta, daawo. Gobollada ayaa xad u dejinaya - ku dheji. Tusaale ahaan, IL wuxuu u oggolaanayaa bukaanka inay ku koraan 5 dool guri kasta oo aan samir lahayn - hubi shuruucda deegaankaaga ka dibna arag inta beero ah ee aad lahaan karto kuna dhegi karto iyada oo aan loo eegin inta jeer ee aad iibsato.
Sidee & Xagee ka iibsataa Xashiishadda - ama miraha marijuana?
Sharciga cusub ee dadka waaweyn ee loo adeegsado Illinois - waxay yiraahdaan waad ka iibsan kartaa abuurka miisaska, laakiin xitaa ma iibsan kartid ubaxa miisaska qaar. Laakiin haddii tani tahay 2022 markaad fiirineyso tan, waan fiicnaan karnaa, laakiin hadda gobolkaagu waa ka baxsan yahay xashiishadda - oo wuxuu oggol yahay in gurigaagu koray haddii aad u baxdo abuur miinshiin, laakiin ma jiraan.
Hagaag, sidee abuur loo qeexay - maxaadse ugu muuqan kartaa inaad uga iibsan karto meelkasta oo internetka ah? Xeerka Maandooriyaha La Xakameeyay wuxuu si gaar ah u qeexayaa xashiishadda inay tahay dhammaan qaybaha geedka xashiishadda canugga, ha noqoto mid koraysa, ama aan ahayn, iyo abuurkeeda.
Miraha Cannabis miyey Sharci tahay maxaa yeelay dhab ahaantii waa Hemp Seeds?
Hindise-sharciyeedka beerta ee 2018 ayaa hemp sharciyeysan si looga dhigo kaliya qaybo ka mid ah geedka xashiishadda cannabis iyo iniinyaheeda loogu talagalay wax-soo-saarka - ama noocyada - oo ka badan 0.3% THC haddii lagu weynaado xaaladaha ku habboon. Marka haddii abuurku lahaan doono wax kabadan 0.3% delta-9 THC, markaa ma ahan abuur hemp ah oo sharci ah, waa xaaraan marijuana sharci darro ah oo ay mamnuucday CSA.
Shuruucda Gobolka ayaa had iyo jeer qeexeysa yaa iibin kara waxa, ay ku jiraan abuurka iyo miinada. Sidaa darteed gobolada qaarkood waa inay u oggolaadaan beerahooda in ay ku iibiyaan abuurkooda khadka tooska ah, ama Kanada waxaa lagayaabaa - laakiin Yurub, Amsterdam ama Barcelona tusaale ahaan - laga yaabee inaad iibsato abuurkaas sidii xusuus.
Runtii wax macno ah ma leh - laakiin waxay muujin doontaa kaliya in aynan fulineynin shuruucda marijuana - sida aysan iyagu ka qabsan California, xeebta galbeed oo dhan - caasimad qaran - gobolka weyn ee Illinois waxaanan rajeyneyaa in gobolkaaga uu hadda ku yimid internetka.
Waa kuwan qaar ka mid ah bogagga internetka si aad uga iibsato abuurka marijuana online -
Mar labaad, kama heleysid talo sharci oo ka socota youtube - laakiin waa kuwan meelaha miraha lagu iibinayo: Yurub gudaheeda
Xagee laga helaa Xashiishadda Cannabis Sharci ahaan Yurub
Abuurka Green House
Xagee laga heli karaa Bixiyeyaasha Shinnida Xashiishadda US
Koofurta Humboldt abuur Wadareed
Immisa iyo noocee ah iniinaha xashiishadda ee ay tahay inaad iibsato?
Dude, kuma siinaayo talo sharciyeed runtiigana kuuma siinayo talo koreysa. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad noqotid mirqaan oo aad la socotid abuur joogto ah, inaad galmo sameysid oo aad ku tababbarto gebi ahaanba inta ay ku sugan tahay sawirkooda iyo ubax si ay u goosadaan, ama waxaad u baahan kartaa inaad ka booddo taas oo aad raacdid abuur haween ah - ama laga yaabee inaad a ku bilow qoraagaaga koowaad.
U fiirso bangiyada abuurkan mar kale - isku xirka faallooyinka si aad u ogaato wax kasta oo hiddo-wadeyaasha laftooda ay kaaga sheegi doonaan abuurkooda - ka dibna eeg xisaab-kayga 'instagram' ee ubax jirran oo ku-meel-gaadhka ah ee sannadka 2020 waxaa lagu magacaabaa dab.
Hadda waad arki kartaa naftaada oo wax weydiinaysa -
Miyaa laygu qabtaa xashiishadda cannabis ama miraha marijuana?
Ka fikir hal shay - oo haddii aad jeceshahay - ku dhufo waxyaabaha ay jeceshahay oo aad is-qorto. Waa sidee habka ciqaabta ay ugu kacdo marijuana ama haysashada xashiishadda? Miisaanka. Waa immisa culeyska shinnida cannabis?
Aad, aad u yar. In yar?
Abuurka cannabis culeyskiisu waa 1.5-2.5 garaam 100kiiba XNUMX.
Abuurka Cannabis waa kuwo aad u fudud
Soo .. ka fikir arintan - IL si aan sharci aheyn u haysato 10 garaam ama kayar 2016 - marka waxaad ubaahantahay boqolaal iniin taas.
Khatar yar ayaa u muuqata.
Gunaanad Ku Iibsashada Seeraha Xashiishadda khadka tooska ah
Kaasoo ina keenaya gabagabada - iyo hadda jawaabta sida Dhirta xashiishaddu waxay si muuqata u gashaa gobollo sharciyeysan in kasta oo uu dambiile yahay maalin ka hor.
Waad ku mahadsantahay isku dhejinta - like & subsidi hadaad sidan jeceshahay - sababta oo ah waxaad heli doontaa ogeysiis ah sharciyeynta xashiishadda cannabis - maalin walba oo jimce ah 2da galabnimo.
Ilaha Xashiishadda Cannabis khadka tooska ah:
Ha i ixtiraamin - waxay ahayd qaladka internetka - macluumaadka ku saabsan miraha xashiishadda waxaa laga heli karaa ku dhawaad ​​meel kasta oo internetka ah: